Instagram အတွက်အကောင်းဆုံးစကားစု ၁၀၀ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
လူများသည်၎င်းအတွက်အလွန်ဘုံဖြစ်လေ့ရှိသည် နာမည်ကြီးသောစာပိုဒ်တိုများသုံးပါ သို့မဟုတ်လက်ရှိလူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုတွင်ဓာတ်ပုံတစ်ခုတင်သောအခါ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားသောစာသား။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Instagram အတွက်စကားစုအရေအတွက်အများဆုံးသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သင်၏အကျိုးစီးပွားနှင့်အညီရှာဖွေမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်မတူညီသောအမျိုးအစားများခွဲခြားထားသည်။
အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှာဖွေနိုင်သောစကားစုများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ခံစားချက်သို့မဟုတ်အခြေအနေအရကျွန်ုပ်တို့ကိုရွေးချယ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အမျိုးမျိုးသောခေါင်းစဉ်များဖြင့်အုပ်စုဖွဲ့သည်၊ ဒီခေါင်းစဉ်တွေထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးစကားစုကတော့ အောင်မြင်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကင်းမဲ့ခြင်း၊ ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်း၊
1 အခင်းအကျင်းအရ Instagram အတွက်အကောင်းဆုံးစကားစုကိုရွေးချယ်ပါ
1.2 Instagram ကိုအတွက်ကျော်လွှားထားသောစာပိုဒ်တိုများ
1.4 Instagram တွင်ကြေကွဲဝမ်းနည်းခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ပျက်ခြင်း
1.6 Instagram ကိုအတွက်ပညာနှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုစာပိုဒ်တိုများ
အခင်းအကျင်းအရ Instagram အတွက်အကောင်းဆုံးစကားစုကိုရွေးချယ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်ခေါင်းစဉ်များအရအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ပြုလုပ်လိုသောထုတ်ဝေမှုအတွက်သင့်အားအကြံဥာဏ်ကောင်းများပေးနိုင်ရန် Instagram Instagram စကားလုံးများဖြင့်ကျယ်ပြန့်သောစာရင်းကိုတင်ပြပါမည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အမျိုးအစားမရှိဘဲစကားစုအချို့ကိုထည့်သွင်းမည်။ အရာပါဝင်သည် ဂုဏ်ပြုလွှာ, မွေးနေ့နှင့်ဂီတ။ နောက်ထပ်ဘာမှပြောစရာမရှိပဲ၊ ကျွန်တော်တို့စာရင်းကိုတင်ပြကြသည်။
သူတို့ဟာအိမ်မှာပြproblemsနာဖြစ်စေ၊ အလုပ်ခွင်မှာဖြစ်စေ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်များဖြစ်စေအခြားရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ပျက်စေသည်။ ဤအချိန်များ၌စိတ်လှုံ့ဆော်မှုရှိသောစကားစုကိုဖတ်ခြင်းသည်သင့်ကိုများစွာကူညီနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည် Instagram ကိုတင်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးကာလကိုမသွားသောသူတို့အားကူညီခြင်းဖြစ်သည်။
သူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိပြုမိသူများသည်ဒေသအသီးသီးတွင်နေ့စဉ်တိုးတက်အောင်လုပ်ရန်ပန်းတိုင်ရှိသည်။ သောလူသားအဖြစ်ကြီးထွားလာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကာယရေးအရမိမိကိုယ်ကိုတိုးတက်စေရုံသာမကဝိညာဉ်ရေးတွင်လည်းတိုးတက်နိုင်သည်။ ဤ Instagram စကားစုများသည်ကျွန်ုပ်တို့ဆန္ဒရှိကြောင်းပြသရန်အသုံးအများဆုံးသောတစ်ခုဖြစ်သည် မည်သည့်အတားအဆီးကိုကျော်လွှား အသက်တာ၌။
သင်ဖြစ်နိုင်သောသူဖြစ်ရန်ဘယ်တော့မှနောက်ကျမည်မဟုတ်။ - ဂျော့ခ်ျ Eliot
လူတစ် ဦး ကျူးလွန်နိုင်သည့်အကြီးမားဆုံးအမှားမှာအမှားတစ်ခုလုပ် မိ၍ ကြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ - Elbert Hubbard
ကျွန်ုပ်တို့သည်မိတ်ဆွေတစ် ဦး သို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားချက်များကိုပြသရန်လိုပါကဤခေါင်းစဉ်၏ Instagram စကားစုများသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောကြောင့်ကိစ္စများစွာတွင်သဟဇာတဖြစ်မှုကိုထောက်ပြရန်အရေးကြီးသည်။ အဆိုပါစုံတွဲသည်ဆက်ဆံရေးအတွက်နေစဉ်ချစ်ကြည်ရေးနှင့်အဖော်လည်းရှိသေး၏။
အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသေခြင်းဟာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမရှိတော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ခဲ့တယ်။ - ဂါဗြေလ Garcia Marquez
သူငယ်ချင်းဆိုတာမင်းအသံကျယ်ကျယ်နဲ့စဉ်းစားနိုင်တဲ့သူပါ။ - အီမာဆန်
အဘသည်ဘဏ္aာတော်ဖြစ်၏။ - Benjamin Franklin
ကျွန်ုပ်တို့၏ခင်မင်ရင်းနှီးမှုသည်နေရာနှင့်အချိန်တို့ကဲ့သို့သောအရာများပေါ်တွင်မူမတည်ပါ။ - Richard Bach
သင့်ကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းပြီးရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပြောပြဖို့ရဲစွမ်းသတ္တိရှိတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုမစဉ်းစားပါနဲ့။ - စိန့်ဂျွန် Bosco
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်လေ့လာသင်ယူခဲ့သည့်အရာတစ်စုံတစ်ခုရှိပါကကရုဏာသည်အမုန်းတရားများထက် ပို၍ အသိဉာဏ်ရှိပြီး၊ သနားကြင်နာမှုသည်တရားမျှတမှုအတွက်ပင် ပို၍ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်၊ လူတစ်ယောက်သည်ဖော်ရွေသောအမြင်ဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသို့သွားလျှင်မိတ်ဆွေကောင်းများဖွဲ့နိုင်သည်။ - ဖိလိပ္ပု Gibbs
သူငယ်ချင်းကောင်းကသူတို့နေရာအနှံ့မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာသင့်အနားမှာရှိနေတဲ့သူပါ။ - လင်းဝိန်း
သူငယ်ချင်းရွေးရန်အချိန်ယူပါ၊ သို့သော်၎င်းကိုပြောင်းလဲရန်နှေးကွေးပါ။ - Benjamin Franklin
ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကပျော်ရွှင်မှုကိုနှစ်ဆတိုးစေသည်။ - ဆာ Francis Francis Bacon
သင်၌ရှိသောသူငယ်ချင်းများ၊ သင်နှင့်သူ၏ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုမင်းရဲ့သံမဏိချိတ်တွေနဲ့ချိတ်လိုက်ပါ။ - ဝီလျံရှိတ်စပီးယား
ချစ်ကြည်ရေးသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာထက် ပို၍ ခက်ခဲသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကဲ့သို့သိမ်းဆည်းရမည်။ - Alberto Moravia
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကသင့်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုသိပြီးသင့်ကိုချစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ - အဲလ်ဘတ် Hubbard
အကောင်းဆုံးမှန်သည်မိတ်ဆွေဟောင်းဖြစ်သည်။ - ဂျော့ခ်ျဟားဘတ်
သူငယ်ချင်းဆိုတာဘာလဲ ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခု၌နေထိုင်သောတစ်ဝိညာဉ်တည်း။ - အရစ္စတိုတယ်
ငါ့သူငယ်ချင်းတွေငါ့အမွေအနှစ်တစ်ခုလုံး။ - အမ်မလီ Dickinson
နောက်ဆုံးမှာတော့ငါတို့ရန်သူရဲ့စကားတွေသာမကငါတို့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုသတိရလိမ့်မည်မဟုတ်။ - မာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာ
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ စစ်မှန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေနည်းတယ်။ - စတီဗင်စန်တာနာ
ရယ်စရာအရာ! လူငယ်တစ် ဦး ၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ပထမဆုံးလက္ခဏာမှာရှက်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးငယ်တစ် ဦး မှာရဲရင့်ခြင်းပါ။ - ဗစ်တာဟူဂို
"... လူတစ်ယောက်ဟာပထမ ဦး ဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့လုပ်ရပ်တွေလုပ်ရမယ်။ ပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့စွမ်းရည်နဲ့ခွန်အားကိုတိုးမြှင့်လိုက်မှသာသူဟာကြီးလေးတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်။ " - Robert E. Way
ပထမဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာကပိုချစ်တယ်။ - Antoine de Saint-Exupéry
ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ပြုသမျှ, ကောင်းသောနှင့်မကောင်းသောအကျော်လွန်ပြီးသည်။ - Friedrich Nietzsche
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်လေ့ကျင့်ခြင်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲစကားလုံးများအားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ - Paulo Coelho
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ချစ်သူများကိုကဗျာဆရာအဖြစ်သို့မပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်မည်သည့်နိုင်ငံမျှမရှိကြောင်းသင်သိရမည်။ - ဗော်တဲယား
အလွန်လှပသောချစ်ခြင်းမေတ္တာများရှိပြီးသူတို့ပြုလုပ်သောအရူးအယောင်များအားလုံးကိုတရားမျှတစေသည်။ - Plutarch
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်နာကြည်းခြင်းနှင့်မုန်းတီးခြင်း၏အဓိကတားမြစ်ချက်ဖြစ်သည်။ - Walter Risso
ငါတို့ငြင်းလို့မရဘူး၊ တစ်ချိန်ချိန်ငါတို့အားလုံးခံစားခဲ့ရတယ် စိတ်ပျက်စရာသို့မဟုတ်ကြေကွဲဖွယ်ဇာတ်စင် ငါတို့ဘဝအတွက်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စာပေများတွင်ပါသောစကားစုပုံစံများကိုနောက်လိုက်များနှင့်မျှဝေချင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မတူညီသောရွေးချယ်မှုများအကြားရွေးချယ်နိုင်အောင်ဤအပိုင်းကိုထပ်ထည့်ပြီးဖြစ်သည်။
ယခုတွင်သင်သည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ငါ့ကိုမချစ်တော့ပါကသင့်ကိုတဖြည်းဖြည်းချစ်မြတ်နိုးတော့မည်မဟုတ်တော့ပါ။ ငါ့ကိုရုတ်တရက်မေ့သွားရင်ငါ့ကိုမရှာပါနဲ့။ ငါက Pablo Neruda ကိုမေ့သွားပြီ
သူတို့ကပြောတာကအချိန်ကုန်တာအားလုံးကိုကုသပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဆက်ဆံရေးမှာတော့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအနာကပိုဆိုးလာတယ် - Karan Johar ။
Fréderic Beigbeder - ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ပရိုဂရမ်တစ်ခုတည်းသောစိတ်ပျက်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထပ်ခါထပ်ခါကျူးလွန်မိသည့်တစ်ခုတည်းသောကြိုတင်မြင်နိုင်သောကံမကောင်းမှုဖြစ်သည်။
“ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မည်မျှအတိုင်းအတာအထိမျက်စိကန်းသည်၊ ၎င်းတွင်ပြောင်းလဲနိုင်သောမှော်စွမ်းရည်သည်မည်မျှအထိရှိသည်ကိုယခုငါစဉ်းစားသည်။ ကမ္ဘာ၏ဂုဏ်အသရေ! " - Ernesto Sábato။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရခြင်းသည်ရိုးရိုးလေးပင်။ အမှန်တကယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုချစ်ရန်မဟုတ်ပါ - အဲလ်ဘတ်ကမူးစ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်တိုလွန်း။ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်နေသည်။ - Pablo Neruda ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်တောင်များကိုမလှုပ်ရှားပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဂရုမစိုက်ပါကသင့်ကိုစိတ်ပျက်စေသည် - Walter Risso ။
မင်းချစ်မိသွားပြီလား။ ဒါစက်ဆုပ်စရာမကောင်းဘူးလား ဒါကသင့်ကိုအားနည်းစေတယ်။ သင်၏ရင်ဘတ်ကိုဖွင့ ်၍ သင့်နှလုံးသားကိုဖွင့်ပါ။ Neil Gaiman ကတစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ကို ၀ င်လာပြီးသင့်ကိုပြန်ဖျက်လို့ရပါတယ်။
Mario Benedetti - ပျော်ရွှင်မှုမှာ ၀ မ်းနည်းစရာများစွာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တစ်ခါမှမစဉ်းစားခဲ့ဘူး။
အမျိုးသားများကသူတို့ချစ်သောသူကိုသူတို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းမခံရမီက Nicholas Machiavelli ကမှားသည်။
တချို့ရုပ်ရှင်တွေကဘဝကိုဒီထက်ပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူပုံရတယ်။ Federico Moccia သည်စိတ်ပျက်စရာများနောက်မှရောက်လာသည်။
"... ဥပမာအားဖြင့်၊ ငါဟာမကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအမှတ်ရနေခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာတွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့်လက်ရှိအတိတ်ကငါ့အတွက်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းပုံမရဘူးဆိုရင်၊ အတိတ်အဖြစ် "- Ernesto Sábato
သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်အရာရာကိုနားလည်ရန်ဘယ်တော့မှမတတ်နိုင်ကြပါ။ ကလေးများအတွက်သူတို့ကိုရှင်းပြချက်ထပ်ခါထပ်ခါပေးရခြင်းသည်အလွန်ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသည် - Antoine de Saint Exúpery။
စောင့်ဆိုင်းမည့်အစားလက်ခံရန်သင်ယူသောအခါ၊ စိတ်ပျက်စရာနည်းနည်းသာရှိလိမ့်မည် - Robert Fisher ။
သင်သည်စုံလင်ခြင်းကိုရှာဖွေပါကဘယ်တော့မှပျော်ရွှင်လိမ့်မည်မဟုတ် - Leo Tolstoy ။
ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းသာမွေးဖွားသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းနေထိုင်ကြသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး တည်းသေသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအားဖြင့်သာကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ကြောင်းခဏတာထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေနိုင်သည်။ - Orson Welles ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာတံခါးကိုခေါက်သောအခါလေပြင်းကဲ့သို့အလျင်အမြန်ထွက်လာလိမ့်မည်။ သင်သည်မကောင်းမှုကိုစွန့ ်၍ ကောင်းကျိုးကိုသာမရနိုင်ပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်တန်းတူသည်ဟုသင်ထင်လျှင်သင်မှားယွင်းသောလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေသည် - Walter Risso ။
ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ စကားစုများအများဆုံးရှာဖွေသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့မရပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ဒီနေရာမှာ Instagram အတွက်စာပိုဒ်တိုများစာရင်း၊
ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည်သင်ခွင့်လွှတ်သူကိုယုံကြည်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်ထိုသူသည်နောက်ဆုံးတွင် ၀ န်ခံပြီးနောင်တရလျှင်သင်၏စိတ်နှလုံးထဲ၌အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ - ဝီလျံပေါလ်လူငယ်
ကျွန်ုပ်၏နည်းဗျူဟာမှာမည်သည့်နေ့တွင်မဆိုသင်နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်ကိုမည်သည့်အကြောင်းပြချက်နှင့်မည်သည့်နည်းဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ - Mario Benedetti
ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည်လူသားဖြစ်တည်မှုဆက်လက်ရှင်သန်ရန်အတွက်လုံးဝလိုအပ်သည်။ - Desmond Tutu
နောင်တယူခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်ဘယ်သောအခါမျှနောက်ကျမည်မဟုတ်ပါ။ - ချားလ်စ်ဒစ်ကင်း
ခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိလျှင်မေ့ပျောက်ခြင်းခံရပါစေ။ - အဲဖရက်ဒီမုစတ်
ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာအချိန်ယူရတယ်၊ - Walter Risso
လူတွေဟာမုန်းတီးတတ်ဖို့သင်ယူရတယ်။ အကယ်လို့မုန်းတတ်ဖို့သင်ယူနိုင်ရင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသင်ပေးနိုင်တယ်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကသူ့နှလုံးသားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ထက်ပိုပြီးသဘာဝကျကျဖြစ်လာတယ်။ - နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလား
ပညာရှိအတွေးများ (သို့) ထင်ဟပ်စေသောစကားစုများသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှာဖွေမှုအရှိဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ Instagram တွင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောစာပိုဒ်တိုများတင်လိုသောသူများအပါအ ၀ င်။ သူတို့ကရောင်ပြန်ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူနေရာချဘို့စံပြ; ရုပ်ပုံတွေပါတဲ့ရုပ်ပုံတွေနဲ့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်တယ်။
ဗဟုသုတအရသိပ္ပံပညာသည်လူတစ် ဦး ကိုအခြားတစ် ဦး ထက် ပို၍ မြင့်မားသောအရာဖြစ်သည့် Joseph Addison ဖြစ်သည်
စာဖတ်ခြင်းသည်လူတစ် ဦး ကိုအပြည့်အ ၀ စေသည်။ စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းကသင့်ကိုလျင်မြန်စေသည်၊ အရေးအသားကသင့်အားတိကျစေသည် - Francis Bacon
နှုတ်ဆက်ရန်ပြောနိုင်ခြင်းသည်ကြီးထွားရန်ဖြစ်သည် - Gustavo Cerati ။
လျှို့ဝှက်ခြင်း၊ လျှို့ဝှက်ခြင်း၊ စွဲမက်ခြင်း၊ စိတ်စွန်းကွက်ခြင်း၊ အဆိပ်အတောက်များ၊ လောင်းလောင်းများသည်မည်မျှပင်သေးငယ်သောနေထိုင်လိုသည်ဖြစ်စေ၎င်းတို့အရိပ်တွင်လက်သည်းများနှင့်သွားများရှိသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့လူသားတွေရဲ့သေဆုံးမှုတွေထဲကတစ်ခုကသရဲတွေနဲ့အတူထာဝရရုန်းကန်နေရမှုအတွက်ရှုတ်ချခံနေရတာပဲ။ အရိပ်သည်လည်ပင်းကိုဖမ်းရန်ခက်ခဲ။ - Les Miserables - Victor Hugo
အဆုံးစွန်သောဥာဏ်ပညာသည်အိပ်မက်များကိုမက်ရန်အိပ်မက်မက်ရန် - သူတို့လိုက်စားနေစဉ်ခြေရာခံရန် William Faulkner ဖြစ်သည်
သင်လိုအပ်တာထက်ပိုပြီးပေးခံရရင်ပညာရှိစွာပြုမူပြီးပညာရှိစွာပေးရမယ် - JK Rowling ။
အနက်ရောင်အဖြစ်မှန်ကိုမြင်ရခြင်းထက်ပိုဆိုးသည်ကား - Antonio Machado
ငြိမ်းချမ်းရေးကသူတို့ကိုမသုတ်သင်နိုင်လျှင်အောင်ပွဲများအသုံးမကျ - အန်တိုနီယိုNariño။
အော်စကာဝိုင်းလ်သည်ကမ္ဘာ၏ကြီးကျယ်သောအဖြစ်အပျက်များကို ဦး နှောက်နှင့် ဦး နှောက်ထဲတွင်သာပြုလုပ်သည်။
အမြဲတမ်းအမှန်တရားကိုပြောပါ။ ဒါဆိုမင်းပြောခဲ့တာကိုမှတ်မိစရာမလိုဘူး - Mark Twain ။
နာကျင်မှု၊ တရားမမျှတမှုနှင့်အမှားအယွင်းများသည်ထူးခြားသောကွဲပြားခြားနားမှုသုံးမျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အတွင်း၌နေထိုင်သောသူသည်တရားမမျှတမှုနှင့်အမှားများကိုလျစ်လျူရှုနိုင်သည်။ နာကျင်မှုကိုအခြားတစ်ဖက်မှလျစ်လျူရှု။ မရပါ လူတစ် ဦး သည်ဒုက္ခခံရသောအခါတစ်ခုခုမှားကြောင်းသိသည်။ ထို့အပြင်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်အားဖြင့် ပြော၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝေဒနာများမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အားကြွေးကြော်နေသော CS Lewis ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာကြီးကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာလူတိုင်းမိမိတို့၏တာ ၀ န်ကိုထမ်းဆောင်ရန် - Charles Kingsley
တိုက်ကြီးအသစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်လူသစ်တွေဖြစ်တဲ့ Jules Verne ။
နေ့ခင်းဘက်တွင်အိပ်မက်မက်သူများသည်ညအချိန်တွင်သာအိပ်မက်မက်သောသူတို့မှလွတ်မြောက်နိုင်သည့်အရာများစွာကိုသတိပြုမိကြသည် - Edgar Allan Poe
သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်နံပါတ်များကိုနှစ်သက်ကြသည်။ သူတို့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အကြောင်းပြောတဲ့အခါသူတို့ကသူရဲ့အနှစ်သာရကိုဘယ်တော့မှမမေးခဲ့ဘူး။ 'မင်းရဲ့အသံလေသံကဘာလဲ။ ဘယ်ဂိမ်းကိုနှစ်သက်ပါသလဲ သင်လိပ်ပြာတွေကိုစုဆောင်းရတာကြိုက်သလား။ ' ဒါပေမဲ့သူတို့က 'သူအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ ညီအစ်ကိုဘယ်နှစ်ယောက်လဲ။ ဘယ်လောက်လေးပါသလဲ မင်းအဖေဘယ်လောက်ရသလဲ။ ' ဒီအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့သာသူတို့ဟာသူ့ကိုသိတယ်လို့ထင်ကြတဲ့ Antoine de Saint Exúpery။
နဂါးနှင့်တိုက်ခိုက်သူမည်သူမဆိုနဂါးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်ဂရုစိုက်ပါ။ သင်သည်အနက်ဆုံးသောတွင်းထဲသို့စေ့စေ့ကြည့်ရှုသောအခါ၊ - Friedrich Nietzsche ။
ဒါတွေကအကောင်းဆုံးပါပဲ စာပိုဒ်တိုများ ကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့နိုင်သောအခင်းအကျင်းတစ်ခုစီ၏။ မင်းတို့ကြိုက်သလောက်မင်းကြိုက်တာကိုငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောစကားစုများနှင့်မှတ်ချက်ထားရန်သို့မဟုတ်သင်၏အာရုံကိုဖမ်းစားရန်သေချာသည့်ဆိုက်ပေါ်ရှိအခြားသက်ဆိုင်သောအရာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » Instagram အတွက်အကောင်းဆုံးစကားစု ၁၀၀
သူငယ်ချင်းများကသတိထားပါ။ မနေ့ကငါအခမဲ့ photomotaging လျှောက်လွှာသို့ဝင်။ ပြproblemနာက, ငါစမ်းသပ်မှုပြုတဲ့အခါ, ငါငါ့အိမျ၏နောက်ခံဓာတ်ပုံရိုက်ယူ။ ကသတိပြုမိခြင်းမရှိဘဲညစ်ညမ်းဓာတ်ပုံကိုပေါ်တွင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကဲ့သို့အလွန်အစစ်အမှန်ပုံပေါ်တပ်ဆင်ထားခဲ့သည် အိမ်မှာကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပေမယ့်ကျွန်တော့်မိန်းမကဆဲလ်ဖုန်းကိုယူပြီးကွာရှင်းလိုက်တာကအံ့သြစရာပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်ကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကငါနဲ့ထပ်တူဖြစ်ခဲ့တာ။ ကျွန်တော်ကတစ်ကိုယ်ရေသမားဖြစ်ပြီးပြproblemsနာမရှိဘူး
lucia ပိုလိုနီယို ဟုသူကပြောသည်
lucia polonio သို့ပြန်သွားပါ